ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : “ ကြမ်းတမ်းသော စစ်ပွဲနှင့် နှုးညံ့သော နှလုံသား ” စာအုပ်ဖြန့်ချိ (ဓါတ်ပုံ ရုပ်သံ)
“ ကြမ်းတမ်းသော စစ်ပွဲနှင့် နှုးညံ့သော နှလုံသား ” စာအုပ်ဖြန့်ချိ (ဓါတ်ပုံ ရုပ်သံ)
ယနေ. Home မှာပြုလုပ်တဲ့ ကိုဇော်သက်ထွေး ၏ “ ကြမ်းတမ်းသော စစ်ပွဲနှင့် နှုးညံ့သော နှလုံသား ” စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲမှာ
ဆရာငြိမ်းအေးအိမ်၊ သူငယ်ချင်း လွမ်းဝေနိုင်တို.နှင့် အမှတ်တရပါ။
ပေးပို့ သူ ကိုကျော်ဇွာမြင့်အားအထူးကျးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲမှာ ကိုသူရ (ခ) ဇာဂနာရဲ. အမှတ်တရစကား။ ( ရုပ်သံ )